विचार / अभिमत – Page 8 – Dhadingnews.com – धादिङ जिल्लाको पहिलो डिजिटल पत्रिका
विपक्षीको बल्छीमा अड्किएको संविधान
अतीन्द्र दाहाल राजनीतिलाई सबै नीतिभन्दा श्रेष्ठ अनि सम्पूर्ण नीतिको राजा मानिन्छ। जुनसुकै देशको प्रगति÷अधोगति राजनीतिसँग पारस्परिक हिसाबले समन्वयिक हुन्छ। बिग्रेका, असफल भएका वा अधोगतिको चंगुलमा फसेका सबै देशको मुख्य कारण राजनीति नै हो। उच्च गरिबी र बेरोजगारीको माखेसाङ्लोमा बेरिएका जिम्बाबे, बुरुन्डी, लाइबेरियाका नागरिक पनि..
मोहन मैनाली लन्डन बस्ने रोशन राईलाई म चिन्दैनथेँ। उनले पनि मलाई चिन्दैनथे। तर पनि केही वर्षपहिले उनले मेरो फेसबुकमा एउटा सन्देश पठाए। उनले जोगीमाराका सानी प्रजा र कमनमाया प्रजाको फोटो खिच्ने फिल्म निर्माता मोहन मैनालीलाई खोजेका रहेछन्। फेसबुकमा भेटिएको म त्यही मोहन मैनाली हुन सकौंला कि भन्ने झिनो आशले उनले मलाई त्यो सन्देश पठाएका..
बालबालिकालाई किन सिटमा नबसाउने ?
अरुणा रायमाझी बच्चा लिएर यात्रा गर्दाको दिन सातदोबाटोकी बिमला बानियाँले चालकसँग झगडा नगरेको दिनै हुन्न । बिमला भन्छिन्, ‘गाडी चढेर बच्चा सिटमा राख्न पाएको हुँदैन, चालकले बच्चा सिटमा नराख्नुस् है भन्न भ्याउँछ ।’ एक दिनको कुरा हो । उनी सातदोबाटोबाट बानेश्वर जाने टेम्पुमा बच्चा लिएर यात्रा गर्दै थिइन् । टेम्पो चालकले भने, ‘ए दिदी ! त्यो..
‘हनुमाने बेस्ड फ्रेन्ड हो’-मंगली
हिजोआज मेरी बास्सै हास्यटेलिसिरियलमा हनुमाने र मंगलीको जोडीको चर्चा चुलिएको छ । समसमायिक विषयमा यो जोडीको प्रस्तुति निकै रोचक पनि छ । हनुमानेको भुमिकामा देखिने बुद्धि तामाङ हुन् भने मंगलीको भुमिकामा देखिने रजनी कोन्मे गुरुङ । नायिका रजनी कोन्मे गुरूङ स्याङ्जा आहले चित्यानकी रजनी २ वर्षयता कला क्षेत्रमा चम्किन थालेकी रहेछन् ।..
धादिङबेसीमा पनि पार्थेनियम
भरतवावु श्रेष्ठ गर्मी एवं वर्षायामको सुरुवातसंगै नेपालको उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रमा रहेको अधिकांंश शहरी क्षेत्रमा, झट्ट हेर्दा तितेपाती जस्तो देखिने एक प्रकारको नयां वनस्पति देख्न सकिन्छ । वैज्ञानिक जगतमा पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस नामले चिनिने यो वनस्पतिको नेपाली नाममा एकरुपता नभए पनि ठाउँ अनुसार यसलाई कनिके घाँस, बेथु घाँस, पड्के..
चर्चा : भ्यालेन्टाईन डे अर्थात प्रणय दिवस
लक्ष्मी परियार प्रणय दिवस, फेव्रुरी १४, भ्यालेन्टाईन डे अर्थात प्रणय दिवस मनाईदै छ । पश्चीमा मुलुकबाट भित्रीएको भ्याईटाईन डे अर्थात प्रणय दिवस नेपाली युवाहरु माझ पनि पछिल्लो क्रममा निकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । धेरैजनाले धेरै योजना छन् होला वा भनौ धेरैले धेरै योजना बनाएका छन् । अरु भन्दा पनि मायाप्रेममा बाधिएकाहरुले आज विशेष खालको..
म अहिले सुध्रिएको छु-अभिनेता दिलिप रायमाझी
काठमाण्डौं, -नायक दिलिप रायमाझीले आफूले केही बर्षअघि बाहिर मन डुलाउँदा घरबार बिग्रिएको खुलासा गरेका छन् । चलचित्रको पर्दामा सोझा देखिने रायमाझी वास्तवीक जिवनमा भने त्यस्तो नरहेको स्विकार गरेका छन् । वास्तविक जीवनमा तपाई कस्तो लोग्ने मान्छे ? भन्ने प्रश्नमा ‘लोग्ने मान्छे’ चलचित्रका नायक दिलिपले भने-‘म अहिले सुध्रिएको छु र आफ्नै घर..
धादिङ जिल्लाको २२ औं जिल्ला परिषद्को निर्णय सार्वजनिकरण वक्तब्य
धादिङ जिल्लाको २२ औं जिल्ला परिषद्को निर्णय सार्वजनिकरण वक्तब्य माननीय सभासद्ज्यू, माननीय जिल्ला न्यायधीशज्यू पूर्व मन्त्री, पूर्व सभासद्, पूर्व सांसद, पूर्व जिविस सभापति एवं पूर्व जनप्रतिनिधिज्यूहरु राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं..
जब म सारीचोलोमा हुन्थेँ, एउटा राजकुमार आएर मेरो सारी तान्थ्यो र मलाई बिकिनीमा प्रस्तुत गथ्र्याे । मीठो चुम्बन दिई सेक्स सम्बन्ध राख्न खोज्दा म बहाना बनाएर भागी हिँड्थे । भाग्दाभाग्दै राजकुमार मलाई सेक्स सम्बन्ध राखेर विलीन हुन्थ्यो, यति बेलासम्म मेरो स्वप्नदोष पनि पूरा हुन्थ्यो । पार्वती राई, मोडल ० हिँड्दाहिँड्दै अपरिचित व्यक्तिले..
ल्हाक्र्याल लामालाई सभासद बनाएर आन्दोलनमा कस्तो उर्जा आउला कमरेड ?
-विष्णु रिजाल एमाओवादीले संविधानसभामा रिक्त एक सिटमा ल्हाक्र्याल लामालाई सभासद् बनाएपछि अहिले सबभन्दा चर्को विरोध उसैका कार्यकर्ताले गरिरहेका छन् । अघिल्लो संविधानसभामा एमालेबाट सभासद् रहेका ल्हाक्र्याल एमालेले एकपटक समानुपातिकबाट सभासद् भएकालाई नदोहोर्याउने नीति पारित गरेपछि चुनावको मुखमा रातारात एमाओवादीमा छिरेका थिए..
काजी श्रेष्ठ / हुन त आजभोली हरेक विषय ‘संक्रमित’ छन् । संक्रमणकालको नाममा अहिले जसले जे गर्न पनि छुट जस्तै भएको छ । नियमनकारी निकाय पनि संक्रमणकालिन रोगले झन बढी संक्रमित भएको दृष्ठान्तहरु यत्रतत्र पाइन्छ । यही नाममा सानादेखि ठूलाभन्दा ठूला विसंगति र विकृतिहरु ढाकिएर बसेका छन् । अँध्यारो हुनलाग्दा बत्ति हुँदैन ! धारामा पानी थाप्न..
लोकतन्त्रलाई जोकतन्त्र बनाइयो !
शंकरप्रसाद नेपालकेही वर्षअघिसम्म आलुको खेती केवल घर खर्च र केही बचत हुने जस्तो भएमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले मात्र खेती गर्ने गरिन्थ्यो । त्यस समयमा आलुको मूल्य पनि त्यति धेरै थिएन केवल प्रति केजी ३÷४ रुपिया“ मात्र थियो । तर ८÷१० वर्षयता आइपुग्दा आलुको माग यति बढ्दै गयो कि मूल्य पनि प्रति केजी ६०।– रुपिया“सम्म हुन गयो । त्यसै कारणले गर्दा..
खाल्डोमा डेढ करोड यसरी भेटियो
म इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाबाट गत भदौमा अपराध अनुसन्धान महाशाखामा आएको हुँ । म यहाँ आउनुअघि नै मेगा बैंक ठगी प्रकरणबारे सुनेको थिएँ । घटना एक वर्षअघिको हो । ठगहरूले गत वर्ष माघ १२ मा मेगा बैंकको नयाँ सडक शाखामा रहेको टुरिज्म बैंकको खाताबाट ९ लाख ९० हजार र माघ १३ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भोटाहिटी शाखाबाट २ करोड रुपियाँ गरी..